ကဆါယ့ၪၡုၬမၧၫ့ထၪ့ထဲၩ့ယုၬ | Radio Veritas Asia
လၧမုနွ့ၫနံၩအထးဖၧၩ့ မုခၪ့ထံၭအနံၩဂီၩဂီၩလ့ၬ လၧဆၧခံၭဒံၭအဘိၩ့ဘၭနီၪ, နးမၫရံၫမၭဂဒၫလံနံၫ လ့ၩထီၩ့ဝ့ၫလၧဆၧၥွၪခိၪအအီၪနီၪ ဒၪဘၪလိးအီၪလၧ ဆၧၥွၪခိၪအဖၧၩ့ခိၪထိၭနီၪ ချံးခွံၬယူၭအၥၭယူၭလီၫ. မၩအၥၭဘဲၫနီၪတၭ, ထဲၩ့စဲၪ့တလဲးဝ့ၫထီၩ့လၧစစဲမၧၫ့ပံတၧၫ ဒဲအဖျဲဂူၫဂၩလၧယ့ၫၡုၬအဲၪဝ့ၫလဂၩအအီၪနီၪ, စံၭအဝ့ၫၥံၪ, ၦလဖၪလ့ၩဆိၬခွံၬယူၭ ကဆါလၧဆၧ ၥွၪခိၪအဖၧၩ့ယူၭတၭ, မွဲအအီၪက့ၪဝ့ၫ ခီၫခီၫလဲၪနီၪ ပၥ့ၪယၫအ့ၬ.
မၩအၥၭဘဲၫနီၪတၭ, စပံတၧၫဒဲအဖျဲဂူၫဂၩလဂၩနီၪ, စဲၪ့ထၪ့ဝ့ၫတၭ လ့ၩဝ့ၫထီၩ့လၧဆၧၥွၪခိၪ အအီၪနီၪလီၫ.- ၦနံၫဂၩစဲၪ့တလဲးဎုၬဝ့ၫနီၪ, အဖျဲဂူၫဂၩလဂၩစဲၪ့ ဖီၩ့ခွံၬစပံတၧၫတၭ, ထီၩ့ဆိၫဝ့ၫလၧဆၧၥွၪခိၪအအီၪလီၫ.- မွဲအယိဆူၭလၩ့ဝ့ၫတၭ, ဒၪဘၪဆၧဘွၩအီၪက့ၪလၩ့အၥၭလါနၫ့ဘိၩလ့ၩနုၬဝ့ၫအ့ၬ.-
မၩအၥၭဘဲၫနီၪတၭ, စပံတၧၫဂဲၫထီၩ့ဝ့ၫလၧအလးခဲၫ့တၭ, လ့ၩနုၬဝ့ၫလၧဆၧၥွၪခိၪအဖၧၩ့နီၪ, ဒၪဘၪဆၧဘွၩအီၪက့ၪလၩ့အၥၭ,- ဒဲပဝၫလၧအဘီၪ့ထၪ့အခိၪဎွံၪအီၪစီၪ့ဎးလၧဆၧဘွၩနီၪအ့ၬ. အီၪထူၫထၪ့ဒၪအၥၭ လၧအလးလစီၪ့ဒၪလီၫ.- မၩအၥၭဘဲၫနီၪတၭ, အဖျဲဂူၫဂၩလဂၩ, လၧအလ့ၩထီၩ့ဆိၫဝ့ၫ လၧဆၧၥွၪခိၪနီၪလ့ၩနုၬဝ့ၫဆ့တၭ, ဒၪဘၪဆၧနီၪနဲၩဝ့ၫလီၫ.- အဂဲးဘဲၫယီၩ ဆၧကွ့ၭအၥၭလၧအဘၪဂဲထုၪ့ထဲၩ့ဝ့ၫ လၧဆၧၥံၫနီၪ အဝ့ၫၥံၪနၪဝ့ၫၥ့ၪဒံၭအ့ၬ.- မၩအၥၭဘဲၫနီၪတၭ, အ ထံၩအဖျဲၥံၪထဲၩ့ထဲၩ့ဒီၭဝ့ၫလၧ အထံၩအၥိၭအအီၪ နီၪလီၫ.
အ့ၪမွဲနးမၫရံၫနီၪ ဂၪ့ဆၧၫ့ထုၪ့ဝ့ၫလၧခီၫ့ လၧဆၧၥွၪခိၪဖၧၩ့အနဲၩ့ထံၭလီၫ. မၩအၥၭဘဲၫနီၪတၭ, ဂၪ့ဝ့ၫ အဘိၩ့ဘၭနီၪ, ၡီၫ့လၩ့အၥၭတၭယိနုၬဝ့ၫလၧဆၧၥွၪခိၪအဖၧၩ့,- ဒၪဘၪအၥီၫ့နံၫဂၩကီၩ့ၥိၭဝ့ၫ လၧအကီၩ့ အၥိၭဘွၩ, ဆၧၫ့နၩ့ဝ့ၫထီးလၧယ့ၫၡုၬအစွၪ အီၪက့ၪလၩ့အၥၭအလးနီၪ လၧအခိၪလဂၩ လၧအခၪ့လဂၩနီၪလီၫ.- အဝ့ၫၥံၪစံၭအဝ့ၫနီၪ, ၦမုၪဧ့, နဂၪ့နီၪမွဲအဘၪဆၧနီၪလဲၪ. အဝ့ၫဒၪစံၭဆၧၫ့အဝ့ၫၥံၪ, အဂဲးဘဲၫယီၩ ၦလဖၪဆိၬခွံၬယကဆါတၭ, အီၪက့ၪလၩ့ဝ့ၫခီၫခီၫ လဲၪနီၪယၥ့ၪယၫအ့ၬ.
ၦမုၪနီၪစံၭဝ့ၫဂီၩ့, ကၠၪထဲၩ့အၥၭလၧအလးခဲၫ့တၭ, ဒၪဘၪလါနၫ့ယ့ၫၡုၬဆၧၫ့ထုၪ့ဝ့ၫတၭ, ၥ့ၪယၫဝ့ၫလၧ အမွဲယ့ၫၡုၬနီၪအ့ၬ.- ယ့ၫၡုၬစံၭဝ့ၫ, ၦမုၪဧ့, နဂၪ့နီၪမွဲဘၪဆၧနီၪလဲၪ. မွဲနအၪ့ဎၬပလၫလဂၩလဲၪ. ၦမုၪနီၪ ဆီၫ့မီၪ့လၧအဝ့ၫဒၪမွဲၦခိၭကျိၭတၭ, စံၭအဝ့ၫ, ကဆါဧ့, နအ့ၪလ့ၩဆိၬခွံၬအဝ့ၫလဂၩတၭ, မွဲနအီၪက့ၪဝ့ၫ ခီၫခီၫလဲၪနီၪ, လီၩဘၪယၧၩဆံၭ. တၭယမိလ့ၩမၩန့ အဝ့ၫဒၪလီၫ.-
ယ့ၫၡုၬစံၭအဝ့ၫ, နးမၫရံၫဧ့, တၭနးမၫရံၫကၠၪထဲၩ့အၥၭနီၪ, စံၭအဝ့ၫဒၪလၧဟံဘြႃၫအလၨ, ရၫဘိနံၫဧ့, (ဘဲၫပစံၭဆၧအၥိၭ, ဆရၫဧ့ၬ) ယ့ၫၡုၬစံၭအဝ့ၫ, ထိၭဘၪယၧၩလဂ့ၩ, ယထဲၩ့ထၪ့ဒံၭလၧယဖါအအီၪဒံၭအ့ၬ. ထဲၩ့လၧယထၧၫ့ဖုဝဲၥံၪအအီၪတၭ, စံၭအဝ့ၫၥံၪ, လၧယထဲၩ့ထၪ့လၧယဖါ, ဒဲလၧနၥံၪအဖါအအီၪ, လၧယယွၩ, ဒဲနၥံၪအယွၩ အအီၪနီၪဆံၭ.
နးမၫရံၫမၭဂဒၫလံနံၫနီၪ ထဲၩ့လီၩဘၪအထံၩအဖျဲၥံၪ လၧအဒၪဘၪကဆါနီၪ ဒဲလၧအလီၩဘၪအဝ့ၫ လၧဆၧနီၪလဖၪလီၫ.